सूचना प्रविधि Archives - Postmandu
मिटिङमा मन्त्री बोलिरहँदा कसले प्ले गर्‍यो अश्लील भिडियो ?
2020-06-22 2020-06-23 PostmanduLeaveaComment on मिटिङमा मन्त्री बोलिरहँदा कसले प्ले गर्‍यो अश्लील भिडियो ?
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार दिउँसो पर्यटनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक गर्न ‘जुम एप’मार्फत भर्चुअल बैठक आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई प्रमुख अतिथि थिए । जब सार्वजनिक भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री बोल्न सुरु गरे, त्यसपछि एक्कसी पोर्न भिडियो बज्न थाल्यो । अनधिकृत रुपमा भर्चुअल मिटिङमा प्रवेश गरेका […]
सामसुङले सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोन ल्याउँदै, यस्ता छन् विशेषता
2020-06-15 2020-06-15 PostmanduLeaveaComment on सामसुङले सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोन ल्याउँदै, यस्ता छन् विशेषता
सामसुङले गत डिसेम्बरमा आफ्नो इन्ट्री लेभल स्मार्टफोन ग्यालेक्सी ए ०१ ब्जारमा ल्याएको थियो । यो फोन सामसुङको ए सिरिजको फोनमध्ये सबैभन्दा सस्तो फोन हो र लोकप्रिय समेत बनिरहेको छ । अब भने सामसुङले आफ्नो ग्यालेक्सी ए ०१ लाई अझै सस्तो तथा नयाँ भर्सनमा पेश गर्दैछ । समाचार अनुसार सामसुङले ग्यालेक्सी ए ०१ को नयाँ संस्करण […]
2020-05-30 2020-05-30 PostmanduLeaveaComment on टिकटकलाई टक्कर दिन फेसबुकले ल्यायो नयाँ एप
चर्चित भिडियो सेयरिङ एप टिकटकलाई टक्कर दिनेगरी फेसबुकले एक नयाँ एप सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकको प्रयोगकतात्मक एप विभागले कोल्याब नामको नयाँ एप तयार गरेको हो । फेसबुकको यो नयाँ एप हाल एप्पल प्रयोगकर्ताका लागि बेटा भर्सनमा मात्र उपलब्ध छ । यो एपले सर्जक र उनीहरूका फ्यानलाई एक ठाउँमा ल्याउनेछ । यो एक म्युजिक मेकिङ […]
अब फेसबुकको फोटो जुम गर्दा फस्नुहुन्छ तपाईं
2019-07-11 2019-07-31 PostmanduLeaveaComment on अब फेसबुकको फोटो जुम गर्दा फस्नुहुन्छ तपाईं
एजेन्सी । फेसबुकमा यदि कुनै फोटोलाई जुम गर्नका लागि दुईपटक ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईंले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । किनभने फेसबुकले इन्स्टाग्राममा भएको फिचर अब फेसबुक एपमा सुरु गरेको छ । वास्तवमा, फेसबुकको आइओएस एपमा अब कुनै फोटोलाई डबल ट्याप गर्दा लाइक हुने फिचर आइसकेको छ । इन्स्टाग्राममा निकै अघिदेखि यो फिचर छ । […]
तीन अर्बभन्दा बढी फेसबुक अकाउन्ट बन्द
2019-05-29 PostmanduLeaveaComment on तीन अर्बभन्दा बढी फेसबुक अकाउन्ट बन्द
एजेन्सी । सोसल मिडिया फेसबुकले ३ अर्ब भन्दा बढी फेसबुक अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को मार्च महिनासम्मको ६ महिनाको अवधिमा फेसबुकले यतिधेरै संख्याका अकाउन्ट हटाएको हो । फेसबुकका अनुसार फेसबुकका मासिक सक्रिय प्रयोगकर्तामध्ये ५ प्रतिशत फेक अकाउन्ट रहेको खुलासा भएको छ । फेसबुकका अनुसार फेसबुक प्रयोगकर्ताले हेर्ने […]
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाले विश्वमै पहिलो पूर्ण–विकसित पाँचौं पुस्ता (5-G) को मोबाइल नेटवर्क विकास गरेको जनाएको छ। तीव्र गतिको यस प्रविधिले मोबाइलबाट डाटा ट्रान्सफरमा अभूतपूर्व फड्को मार्नेछ। पाँचौं पुस्ताको ताररहीत यस प्रविधिले मोबाइलमा कुराकानी मात्र होइन पाउरोटी सेकाउने टोस्टर मेसिनदेखि टेलिफोन, विद्युतीय कारदेखि विद्युत प्रसारण लाइनसम्मको व्यवस्थापनमा सघाउनेछ। चुनौती तर दक्षिण कोरियाको यस प्रविधिले संयुक्तराज्य […]